The Best French fries Na France, Malite Aka Licking | Save A Train
Home > Train Travel France > The Best French fries Na France, Malite Aka Licking
The Best French fries Na France, Malite Aka Licking
Train Travel France
Oge Ọgụgụ: 6 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 24/04/2020)
Ọ dịghị onye maara n'ezie n'ezie na akụkọ nke French fries na France. Anyị nwere ike ghara ọbụna-n'aka ma ọ bụrụ na ha na-abịa site na France, na niile. Chere, Kedu?! Yeap, ị nụrụ na o ziri ezi – ma Belgians na French kwuru nri a, na ha abụọ nwere akụkọ ka kwenye na ị.
Dị ka obodo Belgium akụkọ, ogbenye obodo si Meuse Valley mgbe rie obere eghe azụ ha jidere osimiri. N'oge oyi, osimiri ga-ifriizi n'elu, Ndinam azu agaghị ekwe omume. Si otú, ndị obodo nwere chọta isi mmalite ndị ọzọ nri. Nduku yiri ezi ihe ngwọta. Ya mere, ha malitere slicing na frying ya n'otu ụzọ ahụ ha mere na azụ. Nke ahụ bụ otú ndị mbụ French fries e mere. Anyị maara ihe na ị na-etinyecha na-ajụ ugbu a. Ọ bụrụ na akụkọ a bụ eziokwu, gịnị mere na ha na-akpọ French mgbe? N'ihi na nke American agha. The ndị na-nọrọ Agha Ụwa Mbụ na Belgium detụrụ ndị a miri-eghe poteto na o doro anya na hụrụ ha n'anya. Ha na-akpọ ha French fries n'ihi Belgians gwara French. Olee echepụtakarị, nri?
Gwa a akụkọ a obodo na France, na ha ga-achị ọchị na gị ike na ị ga na-eche iru ala. Ha ga-eleghị anya ọbụna na-akpọ gị crazy. "The amamiihe French chefs mepụtakwara French fries na France, njedebe nke akụkọ. Ha na-French, atụla-enweghị isi, na adịghị asị mgbe ọ bụla ha na-Belgium ọzọ! Ever!"Nke ahụ ga-, mara mma nke ukwuu, enwe mkparịta ụka.
Otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, anyị ịhụnanya a miri-enyi-kpam kpam-adịghị mma-ma-nnọọ-n'eluigwe-akatabi okop-nri, n'agbanyeghị ma ọ bụrụ na anyị na-eri French fries na France ma ọ bụ n'ebe ndị ọzọ. taa, ha bụ otu onye nke kasị ewu ewu na akụkụ efere na ụwa. Ha na-eje ozi na ọtụtụ dị iche iche dips, ma ndị mmadụ na-emekarị họrọ tomato kechoopu, Mayonezi, na mmanya. Na anyị na-anaghị eche ma ọ bụrụ na ị na-akpọ ha French, Onye Belgium nke dị nnọọ ibe, ị kwesịrị ị na nụrụ ụtọ ha na France. Ya mere ka anyị ịme ka ị kasị mma
Isiokwu a na-dere ịkụziri banyere Train Travel na e mere site Save A Train, Ndị dị ọnụ ala Train Tickets weebụsaịtị Na The World.
Rimmer & sweet, Lyon: mouthwatering Ụtọ
Ị a foodie? Good! Ị ga-n'anya n'ebe a! Rimmer & Zoet bụ obere ighe shop na obi nke Vieux Lyon, otu n'ime kasị ama èzí Lyon. Ị nwere ike nweta fries na a cone ebe a. Ị ga-enweta ihendori oke, nnọọ na a cone, kama na a obere plastic efere. The ihe na-eme ka ndị a fries nnọọ ụtọ bụ na ha na-thicker na abụọ-eghe. sooo crispy! Ọ bụrụ na ị-akwụsị n'ebe a na enyi, adịghị abụ ihe nzuzu ịzụta na otu cone ma na-eso. The oge ị ma nụrụ ụtọ ndị a poteto, ị ga-amalite na-alụ ọgụ ha! Erm ... anyị maara na anyị nwere.
Brussels na Lyon site na Ọzụzụ
London na Lyon site na Ọzụzụ
Marseille ka Lyon Ụgbọ oloko
Amsterdam ka Lyon Train oge
George V Cafe, Paris: Erite Paris nke kwekọrọ nnọọ
Ọ bụrụ na ị bụghị ka Champs Elysee, ọ bụ dị ka ị bụghị ka Paris. karịsịa ma ọ bụrụ ị zụọ njem site Europe (ma nke ahụ bụ ọzọ isiokwu). agbanyeghị, George V Cafe bụ a zuru okè n'ebe enwe ambiance na magburu onwe French fries na France. Nyere ya ebe, ị kwesịrị ị na-anya na a elu price. Ma mgbe ị sook ke Paris ikuku, ị ga-ahụ na ọ bụ ọnụ ahịa ọ bụla penny. Meda mgbe ị na-achọ na ndị mmadụ na-agafe, na waiters agba agba gburugburu. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-enye typical French nri, na now fries abịa na fọrọ nke nta ka ihe niile.
Dijon na Paris Ụgbọ oloko
Reims na Paris Ụgbọ oloko
Lille na Paris Ụgbọ oloko
Bordeaux na Paris Ụgbọ oloko
New Bridge La Frite French, Paris: A Serious Approach ka French fries na France
Ndị kwere French fries na France na-adịghị ga-abụ nnọọ a akụkụ nri, ma a kwesịrị ekwesị nri ga-elele ebe a si. Na onye ọ bụla na-atọ fries na Pont-Neuf La Frite Française ga-ekweta ozugbo. Jere ozi na cute odo-na-na-acha ọcha katọn efere, French fries bụ isi N'ezie ebe a. Ị ọbụna inwe a obere osisi ndụdụ. Họrọ n'etiti ọtụtụ dị iche iche dips, ma anyị ndụmọdụ bụ itinye nke ulo, na "ink mikpuo." The fries nụrụ ụtọ ọbụna mma ma ọ bụrụ na ị na tinye Paris ham na mix.
Marseille na Paris Ụgbọ oloko
Cologne na Paris Ụgbọ oloko
de Clercq, Paris: Belgian Version of Fries
Ị maara ihe ha na-ekwu: "Ọ bụrụ na ị na-amaghị ebe iri, gaa a restaurant na jupụtara ndị mmadụ. "Mgbe na-achị, anyị biri na De Clercq, a ahịa na-azọrọ na-ere Belgium fries. Ọ bụrụ na Onye Belgium version bụ kegriiz, crunchy n'èzí, na juu na n'ime, anyị niile bụ ndị na. Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ihe ọzọ ma e wezụga ndị a mouthwatering nduku ruo, anyị nwere ike ikwu burgers, n'ihi na ha na-super na-atọ ụtọ. Ma ọ bụghị ya, ma ọ bụrụ na nnọọ na ị chọrọ a ikpo nke fries, ịtụ a ibu mkpọ nke bụ ezuru mmadụ anọ.
Strasbourg na Paris Ụgbọ oloko
Zurich na Paris Ụgbọ oloko
Frankfurt na Paris Ụgbọ oloko
Geneva na Paris Ụgbọ oloko
Le Relais De L'Entrecote, Paris: A kapịrị French fries Na France Ahụmahụ
Ndi anyị na-ama kwuru na French ịhụnanya na-eri fries na ibe anụ? No? Ọfọn, e ị na-aga. ha na-eme. Ọ bụ ha ihe. Na Le Relais de l'Entrecote nke ahụ bụ nanị isi efere i nwere ike ịtụ. kpọrọ, e nweghị ndị ọzọ isi N'ezie n'ebe a. Na oge ị na-anọdụ ala, na onyenchere nwaanyi ajụ gị otú ị na-amasị gị ibe anụ na-esiri: obere, ajụ ma ọ bụ na mere nke ọma. Gịnị na-eme nke a ibe anụ pụrụ iche bụ ihendori onye Ntụziaka e wee na a na nzuzo n'ihi na ihe karịrị 50 afọ. Na ihe na-eme ka dum nri nnọọ irresistible bụ zuru okè ọlaedo French fries na France.
Lyon na Paris Ụgbọ oloko
Provence na Paris Ụgbọ oloko
Montpellier na Paris Ụgbọ oloko
Nice na Paris Ụgbọ oloko
Chez Boris, Paris: Farmers Ndị Na-eme zuru okè Food
Achọ a zuru okè n'ebe eri steaks na French fries na France? Asị na ọ dịghị ihe. Anyị chọpụtara na a na ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Ogo nke anụ bụ na ọzọ larịị. French fries bụ n'aka ịkpụ na e ghere eghe na beef abụba, nke bụ ihe tastier karịa ọ na-ada. Nwe nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-ọrụ ugbo, ya mere, ha maara nke ọma ihe ị na-eri. The naanị mkpesa ga-abụ ahịa n'ihi na ha bụ a bit ... elu. Ma ozugbo ị nụrụ ụtọ nri Chez Boris, i nwere ike ikwu na otu ihe: "Were m ego, na ebe a na - na ụfọdụ ndị ọzọ!"
ndumodu: ị nwere ike n'akwụkwọ a London na Paris ụgbọ okporo ugbu a na-na Chez Boris mee elu mee ka ị na-eche!
French fries aghọwo a na-emeso ya n'ụwa niile. Onye ọ bụla na-akwadebe ha na-eje ozi ha na ha mmasị nri. ka, anyị ndụmọdụ gị na-eri ha ebe ha na-mepụtakwara. Anyị na-kwere na n'ụlọ ha na obodo bụ France, bụghị Belgium. na, dị ka ị pụrụ ịhụ ihe, oké French fries na France nwere ike ịchọta na fọrọ nke nta ka ọ bụla French nkuku. I nwere ike iri ha dị ka a akụkụ nri, ma ọ bụ dị ka a isi N'ezie. Ya mere, na-na-eche maka a abụọ ogologo!
Gaa na anyị na Zọpụta-A-Train ịzụta gị tiketi ka France, ma kwadebe onwe gị maka French fries na France ụtọ!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-french-fries-france%2F - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / ja na / es ma ọ bụ / tr na ndị ọzọ asụsụ.
#frenchfries #fries Food foodies travelfrance
UNESCO World Heritage Sites Na Europe
Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Zụọnụ Ndụmọdụ, Train Travel UK, Travel Europe
Top 10 Ego Exchange Points Na Europe
Train Travel Austria, Train Travel Denmark, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Luxembourg ụgbọ oloko, Zụọnụ Ndụmọdụ, Train Travel UK, Travel Europe
5 Best Winter aga Europe
Njem ụgbọ oloko, Train Travel Austria, Train Travel France, Train Travel Hungary, Inzọ Njem Italytali, Train Travel Switzerland, Zụọnụ Ndụmọdụ, Travel Europe
10 Atụmatụ Otu esi eme njem na China Site na ụgbọ oloko
10 Kasị Mma Coastal Towns Na Europe
10 Epic Ebe ileta Na China
10 Best Theme Parks Na Europe
7 Egwuregwu bọọlụ kachasị ịtụnanya na Europe